Senator Cumar C/rashiid oo Muqdisho kusoo laabtay iyo Su'aal aanu fileyn oo la weydiiyay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Senator Cumar C/rashiid oo Muqdisho kusoo laabtay iyo Su'aal aanu fileyn oo la weydiiyay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ra’iisal wasaarihii hore Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa maanta kusoo laabtay magaalada Muqdisho, kadib sanado badan oo uu dibad joog dalka ka ahaa.
Waxaa garoonka Muqdisho kusoo dhoweeyay xubno ka mida Midowga Musharixiinta oo ay ka mid ahaayeen Shariif Xasann Sheekh Aadan iyo Daahir Maxamud, wuxuuna sheegay inuu u yimid sidii uu qeyb uga noqon lahaa Doorashada, balse ay xaaladu cakiran tahay.
Cumar C/rashiid oo ahaa Senator ka tirsan Aqalka Sare, balse muddo ka badan 4 sano aan dalka imaan, kana qeybgelin fadhiyada Aqalka Sare, marka laga reebo kulamadii ugu horeeyay ee Doorashada Madaxweynaha ayaa la weydiiyay markii uu waanta Muqdisho kusoo laabtay su’aal lama filaan ku ahayd oo ahayd:
“Muddo ayaad dalka maqneyd adigoo ahaa Senator ka tirsan Aqalka Sare oo dibadjoog ahayd, haddana dhaliil ayaad jeedineysaa… maxaad inta aad Senatorka ahayd uga qeyb qaadan weyday isbedelka aad hadda raadineyso waqiga aad xilka ku fadhiday..?
Jawaabtii Cumar C/rashiid ayaa noqotay: “Ninyahow Aqalka Sare waa tii la dilay sow maaha.. Aqal Sare maba jirin intii muddo ah, waxaa laga shaqeeeyay in la curyaamiyo oo muddo ayuu curyaansanaa. Far kaliya fool ma dhaqdo .. arrintu meeshaas ma taagnaa.. imaatinkeygu waa markii ugu haboonaa..”
Kursiga Aqalka Sare ee Cumar C/rashiid ayaa waxaa jira kuraas kale oo la mid ahaa kana tirsan labada Aqalka ee Baarlamaankii 10-aad oo aanay wax shaqo ah qaban xildhibaannada iyo Senatoorada ku fadhiya haddana canshuurta dalka ay mushaar ahaan u qaadanayeen.
Previous articleAlshabaab oo Weerar ku qaaday magaalada Beledweyne iyo Caruur isku Qoys ahaa oo ku dhintay
Next articleDagaalkii dheeraa ee Farmaajo u galay inaysan Dalka Doorasho ka dhicin (Qormo xusuus ah)